Omenala mpempe akwụkwọ metal laser ọnwụ akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
Usoro mpempe akwụkwọ ahụ gụnyere ịchacha laser, nke kachasị na-eji lasers arụmọrụ dị elu ka ọ kanye ma belata ihe. Mpempe akwụkwọ metal ngwaahịa nwere àgwà nke ìhè arọ, elu ike, eletriki conductivity, ala na-eri, na ezi uka mmepụta arụmọrụ. Ha nwere otutu uzo eji eme ihe.
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-arụ ọrụ
A na-eji usoro nhazi n'ọtụtụ ebe na ngwa eletrọniki, nkwukọrịta, ụlọ ọrụ ụgbọ ala, akụrụngwa ahụike na mpaghara ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, na kọmputa, ekwentị mkpanaaka, na MP3, mpempe akwụkwọ bụ akụkụ dị oke mkpa. Na mgbakwunye, a na-eji ya n'ichepụta ngwaọrụ ọgwụ, yana ahụ ụgbọ ala na gwongworo (gwongworo), ụgbọ elu ụgbọ elu na nku, tebụl ọgwụ, ịtọ ụlọ (ihe owuwu) na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ.
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ metal akụkụ laser ọnwụ
Osote: Elu àgwà OEM mpempe akwụkwọ metal laser ịkpụ akụkụ